काँग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो,१० जना सभापतीका आकांक्षी – मोफसल खबर
काँग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो,१० जना सभापतीका आकांक्षी
नेपाली काँग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । कोरोनासंक्रमणले महाधिवेशनको गतिविधिमा चार महिना ब्रेक लागे पनि साउन पहिलो साताबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण जारी छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्येनजर गरी चैत पहिलो साताबाट महाधिवेशनका गतिविधि थाती राखिएकोमा २२ असारको केन्द्रीय समिति बैठकले फेरि अगाडि बढाउने निर्णय लिएको थियो ।
नेपाली काँग्रेसमा भावी सभापतिका लागि करिब एक दर्जन आकांक्षी देखिएका छन् । २२ असारको केन्द्रीय समिति बैठकले सबै तहको अधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी महाधिवेशन आगामी फागुन ७–१० मै गर्ने निर्णय लिएपछि आकांक्षीको दौडधुप सुरु भएको छ । आकांक्षीहरुबीच आ–आफ्नो अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आन्तरिक छलफल र मिडियामार्फत् प्रचारबाजी चलिरहेको छ । सभापतिमा दोहोरिने मनसायका साथ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मनोनयन र नियुक्तिमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
यसैगरी, वरिष्ठ नेता पौडेलले समेत आफू निकट नेताहरूमार्फत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिँदै आइरहेका छन् । सभापतिको सन्देश दिने गरी नेता पौडेलले अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेपछि कार्यकर्तासँगका भेटघाटमा पनि बाक्लिएको छ । पछिल्लो समय उनी सभापति देउवाका हरेक निर्णय विरुद्ध आक्रमक देखिन थालेका छन् । देउवाभन्दा एक वर्ष जेठा पौडेलले उमेरका आधारमा मूल्याङ्कन नहुने बताएका थिए ।
केन्द्रमा आफ्नो गुट अस्तित्व कायम गर्दै जिल्ला तहबाट महाधिवेशनको शक्ति आर्जनमा केन्द्रित देखिन्छन् । यस्तै उपसभापति निधिसमेत सभापतिका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिन प्रयासरत छन् । संस्थापन पक्षसँगै उनले संस्थापन इतर पक्षसँग पनि छलफल र संवाद बढाइरहेका छन् । केही दिनअघि निधिले आफूलाई भेटेरै सभापतिमा सघाउन आग्रह गरेको शशांक कोइरालाको दाबी छ । तर निधिले देउवासँगको छलफल र सहमति बेगर सार्वजनिक रुपमा सभापति प्रकट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । १४औँ महाधिवेशनमा देउवा आफै उम्मेदवार भए निधिले आफू उम्मेदवार हुने नहुनेबारे छलफल गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
यता महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले समेत आफू पार्टी नेतृत्वका लागि तयार रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्यका लागि आफू उपयुक्त पात्र भएको उनको जिकिर छ ।काँग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता सिंहले पनि आगामी महाधिवेशनमा आफू पनि नेतृत्वको आकांक्षी रहेको उद्घोष गरिसकेको अवस्था छ । पौडेल समूहमा रहेका सिंह पनि उपगुट निर्माण गरि भावी सभापतिका लागि महोल सिर्जना केन्द्रित देखिन्छन् । उनले बिजुली बजारमा निर्वाचनका समयमा खोलेको सम्पर्क कार्यालयलाई भेटघाटको थलो बनाएका छन् ।
तर चाक्सीबारीस्थित सिंह निवासमा भेटघाट र चहलफल बढी छ । पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अभिलासासहित गत हिउँदमा देश दौडाहमा निस्किएका सिंह यतिबेला आन्तरिक भेटघाट र छलफलमा व्यस्त भएको पाइन्छ । यस्तै काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि १४औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको आकांक्षा पालेका नेता हुन् । पौडेल समूहमा रशेका शेखर पनि गुट निर्माणमा संघर्षरत छन् । उनले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पहुँच विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ ।
१३ औँ महाधिवेशनमा देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा पराजित भएका केसी गत आम चुनावपछि पौडेल समूहमा जोडिएका थिए । यस्तै पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महतले पनि आफूलाई सभापतिका रुपमा गर्दै आएका छन् । उनले पनि मिडिया र सभा समारोहमा सभापतिका आकांक्षा दर्शाउँदै आएका छन् । यस्तै काँग्रेस युवा नेता गगन थापाले समेत आफू सभापतिको आकांक्षी हुन सक्ने सन्देश दिएका छन् । १३ औँ महाधिवेशनमा सिटौला समूबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार भएर पराजित भएका थापाले युवा नेताहरु नेतृत्वमा आउन हिम्मत गर्नुपर्ने बताएका थिए ।